एचआई संक्रमित र सुत्केरी महिलालाई निःशुल्क एम्बुलेन्स
बाजुरा । जिल्लाको बुढीगंंगा नगरपालिका वडा नंं १० ले वडाभित्रका सुत्केरी र एचआइभि संक्रमितहरूका लागि निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा दिने निर्णय गरेको छ । वडाभित्रका स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी गराउन नसक्ने अ...
कैलाली र कञ्चनपुरमा पिउने पानीमा आर्सेनिकको मात्रा बढी
धनगढी । कैलाली र कञ्चनपुरको दक्षिणी क्षेत्रमा आर्सेनिकको मात्रा बढी रहे पनि परीक्षण गराएर पानी पिउने चेतनाको विकास हुन सकेको छैन । परिक्षण नगराइ पानी पिउने बानीले मानिसहरु विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्...
गोरु गोठबाट स्वास्थ्य सेवा
बाजुरा । स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिका वडा न.१ मा रहेको साप्पाटा स्वास्थ्यको भवन निमार्ण भैसके पनि व्यबस्थापन हुन नसक्दा स्वास्थ्य चौकी गोरु गोठमा राखेर सेवा दिन बाध्य भएका छन् । स्वास्थ्य चौकी को का...
अब गुम्दैन आँखाको ज्योति, वैज्ञानिकले पत्ता लगाए कमालको आइ ड्रप
बेलायत । बर्मिघंम विश्वविद्यालयका प्रोफेसर तथा प्रमुख सोधकर्ता लियाम ग्रोबर लगायतको टीमले कमालको आइ ड्रपको विकास गरेका छन् । प्रोफेसर लियामले सोध सफल भएसँगै भने, फ्लुइड जेल एक नयाँ पदार्थ हो । जुन ...
बिग्रेको मेशिनबाट काम चलाउँदै स्वास्थ्यकर्मी
प्युठान । प्यूठान नगरपालिका–१ स्थित दाखाक्वाडी स्वास्थ्य चौकीमा विगत एक वर्षदेखि बिग्रिएको प्रेसर जाँच्ने (विपी) मेशिनबाट स्वास्थ्य कर्मीले काम चलाउँदै आइरहेका छन् । स्वास्थ्य जस्ताे संवेदनसिल क्षेत्...
केवल दुई रुपैंयामा उपचार गर्ने डाक्टरको निधन
चेन्नई । भारतीय राज्य तमिलनाडुको राजधानी चेन्नई स्थित चर्चित एवंम प्रसिद्ध डाक्टर जयाचन्द्रनको निधन भएको छ । डाक्टर एस जयाचन्द्रन आम नागरिक सँग मात्र दुई रुपैंया लिएर विरामीको जाँच गर्दथे । ‘मक्कल मा...
निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरबाट तीन सय बढी लाभान्वित
कञ्चनपुर । भीमदत्त नगरपालिका वडा नं ९ खल्ला टुँडिखेलका तीन सय बढी स्थानियहरुले निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरबाट स्वास्थ सेवा लिएका छन् । भीमदत्त नगरपालिका, सुदुरपश्चिम फार्मेसी संगठनका र सुर्योदय बहुउद्दे...
३ दिने निशुल्क बृहत स्वास्थ्य शिविर सम्पन्न
रसुवा । जनता बैंक नेपाल लिमिटेडको आयोजनामा रसुवाको दुई स्थानमा ३ दिने बृहत निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर तथा आँखा शिविर सम्पन्न गरिएको छ । संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वमा ग्रामिण स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा ...
धनगढी । सुदुरपश्चिम सरकारले स्वास्थ्यकर्मीलाई कार्यालय समयमा नीजि अस्पताल तथा क्लिनिकमा काम नगर्न निर्देशन दिएपनि कयौं चिकित्सक तथा नर्सहरुले सो निर्देशन उल्लंघन गरेका छन् । प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशन...
अञ्चल अस्पतालको चरम लापरबाही: गर्भवतीले समेत औषधी पाएनन्
कैलाली । सेती अञ्चल अस्पतालको प्रसुती वार्डमा आवश्यक औषधी नभएको भन्दै गर्भवतीहरुलाई व्यथा लागेका वेला पनि अन्यत्र पठाउने गरेको पाईएको छ । प्रसुती वार्डकै स्वास्थ्यकर्मीहरुको चरम लापरवाहीका कारण औषध...
सरकारी अस्पतालप्रति जनताको विश्वास बढाउन आवश्यक छ : नगरप्रमुख पाण्डे
तुलसीपुर । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख घनश्याम पाण्डेले सरकारी अस्पताल प्रति जनताको विश्वास वढाउन आवश्यक रहेको वताएका छन् । तुलसीपुर उपमहानगरपालिका स्वास्थ्य शाखाले आयोजना गरेको समिक्षा कार्यक...
कपिलवस्तुमा १४ हजार स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध
कपिलवस्तु । सरकारले विपन्न र गरीब समुदायका नागरिकका लागि गुणस्तरीय उपचार सेवामा पहुँच बढाउने उद्देश्यले सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम यहाँ मन्द गतिमा अघि बढेको छ । हालसम्म जिल्लामा दुई हजार ७...
असमान यौनेच्छा दम्पती वा जोडीमध्ये एकलाई बढी यौनेच्छा हुनु र अर्कोलाई कम हुनुलाई अनमेल वा असमान यौनेच्छा (mismatched libido) भनिन्छ । यसले वैवाहिक तथा यौन जीवनमा असजिलो सिर्जना गर्ने पक्का छ । यस्तो ...
म विवाहित पुरुष हुँ । मेरो विवाह भएको १२ वर्ष भयो । यौन सम्पर्क गर्दा शुक्रकीट छिटो झर्छ, श्रीमतीलाई सन्तुष्ट तुल्याउन सक्दिनँ । लामो समयसम्म यौनसम्पर्क गर्न वा श्रीमतीलाई सन्तुष्ट राख्न के गर्नुपर्ला...
प्रसुती गृहका लागि चार लाखबराबरको सामाग्री सहयोग
बाजुरा । प्रसुती गृह सञ्चालनका लागि पीसवीन बाजुरा नामक गैर सरकारी संस्थाले चार लाख बराबरको आवश्यक सामाग्री सहयोग गरेको छ । पीसविनले करिव चार लाख बराबरको बर्थिङ्ग सेन्टर सेटअप सामाग्री सहयोग गरेको ब्र...
काठमाडौँ । परिवार नियोजनका बारेमा आम व्यक्तिलाई जानकारी छ तर प्रयोगदर भने न्यून नै रहेको पाइएको छ । परिवार नियोजनका सेवा सरकारले निःशुल्क उपलब्ध गराउँदै आएको छ । प्रजनन स्वास्थ्य विधेयकले यसलाई आधारभ...
‘अब फर्किन्नँ’ भन्दै ओम अस्पतालबाट बाहिरिए डा. भोला रिजाल
काठमाडौँ । वरिष्ठ स्त्री तथा प्रसूतिरोग विशेषज्ञ डा. भोला रिजाल आफैँले स्थापना गरेको ओम अस्पतालबाट ‘अब फर्किन्नँ’ भन्दै बाहिरिएका छन् । झन्डै ३ दशकअघि आफैँले स्थापना गरेको अस्पतालमा आफ्नो सेयर कायमै ...
स्क्रब टाइफसको सङ्क्रमण
चितवन । गएको साउन महिनामा जिल्लामा ८२ जनामा स्क्रब टाइफसको सङ्क्रमण भेटिएको छ । जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय चितवनले दिएको जानकारी अनुसार ४३१ जना बिरामीको नमूना परीक्षण गरिएको थियो । मुसामा हुने किरा (...
दुर्गममा सेवा गर्ने डा‌‍.रुपचन्द्र दर्नाल अवार्डवाट सम्मानित
काठमाडौं । दुर्गम हिमाली जिल्ला बाजुराका कुना काप्चामा पुगेर अहोरात्र सेवा दिदै आईरहेका डा. रुपचन्द्र विश्कर्मा सामाजिक न्यायका लागि दर्नाल अवार्डबाट सम्मानित भएका हुन् । बुधबार राष्ट्रियसभा गृहमा...
इटहरी । धरानस्थित बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले बिरामीको चापलाई ध्यानमा राख्दै आफ्नो स्वामित्वमा धरानको छाताचोकमा रहेको करीब एक बिगाहा १४ कट्ठा जग्गामा १०० श्ययाको अस्पताल सेवा विस्तार ग...